Bank Accounts | Kar Kar Gyi
Only pre-paid system will be available you can transfer through convenient banks the KBZ, AYA, CB, Wave Money.
ရန်ကုန်ုမြို့တွင်းသီးသန့် ပစ္စည်းရောက်မှငွေပေးချေနိုင်သောစနစ်(Cash On Deliver)နှင့်နယ်ဝေးမြို့များအတွက် ငွေကြိုလွှဲစနစ်(Prepaid System)ကိုအသုံးပြု၍မိမိအဆင်ပြေသောအစရှိသည့် KBZ,CB,AYA Bankဘဏ်များသို့ ငွေလွှဲများပေးပို့၍ ငွေပေးချေနိုင်သည်အပြင်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Wave Money ဖုန်းနံပါတ်သို့ငွေလွှဲများပေးပို့၍လဲ ငွေပေးချေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Then please send us your payment transfer slip or wave money message(screenshots) as following -
1.Write your name, phone, order number on the bank slip and for mobile banking user please write your name and phone number in transfer reason and sent screenshots to viber number (+959 5170098) or email (sales@karkargyi@gmail.com)
၁.Bank Slipတွင် ပစ္စည်းမှာယူသူ၏အမည်၊ဖုန်းနံပါတ်များကိုရေး၍လည်းကောင်း၊Mobile Bankingအသုံးပြုသူများအတွက် အခြားဝယ်ယူသူများနှင့်ကွဲပြားစေရန်အတွက် Transfer Reasonတွင်အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရေးပြီး Mobile Banking SlipကိုScreenShootရိုက်၍ Phone/Viber Number(+95)95170098သို့လည်းကောင်း၊Email(sales@karkargyitrading.com)သို့လည်းကောင်းပေးပို့ပေးပါရန်။
2.Call us to confirm the payment transfer at +959 5170098,+959 777508451 (or) please contact as during office hour Monday to Sunday from 9:30 to 18:00
၂.ငွေလွှဲပြီးကြောင်းကို Phone Number-095170098/09777508451 သို့ရုံးချိန်(မနက်၉နာရီခွဲမှည၆နာရီအတွင်း)ဆက်သွယ် အတည်ပြုပြောကြားပေးပါရန်။
3. As soon as we have received your payment transfer, we will procced for delivery within one or three working days.
၃.ငွေလွှဲလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီး တပြိုင်နက်Orderကိစ္စများကို အလုပ်ချိန်(၁ရက်မှ၃ရက်အတွင်း)အတတ်နိုင်ဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။
Name-Min Waiyan Moe
Bank Account Number-0048600100007153
CB Bank(Thein Phyu Branch)
Ps.ကျေးဇူးပြုပြီး ငွေဝင်ရင် 095170098ကိုဖုန်းဆက်ပြောပေးဖို့ပြောပေးပါ။
ငွေလွှဲပြီး bank slipလေးviberသို့မဟုတ်messengerမှပို့ပေးပါရန်။
Name-Wai Yan Min Thu
AYA Bank(YGN-51 Branch)
Bank Account Number-27430127400041201
KBZ Bank(YGN-97(Anawtahta Road))
Acc Name-Min Wai Yan Moe